MET အစည်းအဝေး..(DMA) (၁၅.၁၀.၂၀၁၃) ~ MSU Portal
MET အစည်းအဝေး..(DMA) (၁၅.၁၀.၂၀၁၃)
10/21/2013 11:30:00 PM Hpyae No comments
IMO က..ရှေ့လထဲမှာ..Voluntary Audit နဲ့ပါတ်သက်ပြီး..မြန်မာနိုင်ငံကို..လာပါ့မယ်..။
IMO အဖွဲ့ဝင်..နိုင်ငံတစ်ခု..ဖြစ်တဲ့..Malaysia ကလည်း..မြန်မာနိုင်ငံ MET (Maritime Education & Training) စနစ်သစ်..အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့..အနေအထားကို.. Audit လာပါ့မယ်..။
IMO ကလည်း..မြန်မာနိုင်ငံမှာ..ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့..သင်တန်းကျောင်းများ..စာရင်းကို. .တောင်းနေတဲ့..အတွက်..စာရင်းပို့ရပါတော့မယ်..။
White List ကို..ထိခိုက်..စေမှာ..ဖြစ်ပါတယ်..။
သင်တန်းကျောင်းများ..ကို..Unscheduled Monitoring လုပ်ခဲ့တဲ့..စစ်ဆေးရေး.အဖွဲ့များ..ရဲ့..တွေ့ရှိချက်များ..တင်ပြတာကိုလည်း..နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်..။
လူငယ်..အများစုရဲ့..Concept ပြောရမလား..Mindset ပြောရမလား..။ ကိုယ့်..Professional အပေါ်ထားတဲ့.. ခံယူချက်..အားနည်းနေတယ်..။
စည်းကမ်း၊ ပညာရပ်အပေါ်မှာ.စိတ်ဝင်စားမှု..၊ အားနည်းပြီး..
ချောင်တဲ့..နေရာ..ကို..နှစ်သက်မှု..၊ မေးခွန်း..နောက်သာ..လိုက်နေမှု..၊ မကျပါဘူးကွာ..မအောင်တာဘဲ..ရှိပါတယ်..။ ၀င်စမ်းလိုက်ဦးမယ်..ဆိုတဲ့..အတွေး..
DMA ဘက်က..လုပ်သင့်တဲ့..အလုပ်မှန်းသိပေမဲ့..တိုင်စာ..ပစ်စာ. .ကြောက်နေရလို့..
ဆရာတွေ..သင်တန်းတွေကလည်း..စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့..Professional ကောင်းတွေ..ဖြစ်လာအောင်..မွေးထုတ်ရမှာပါ..။ စီးပွားရေး..အရမ်းဆန်လို့..မရပါဘူး..။
English မှာ..အခြေခံကောင်းအောင်..ကြိုးစားဘို့..၊ သဘောင်္ပေါ်မှာ..နေစဉ်ကထဲက..စာတွေ့..လက်တွေ့..အသိရှိရှိ..
နိုင်ငံတော်အပိုင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအပိုင်းကလည်း..၊ အခြားနိုင်ငံများမှာ..ကျင့်သုံးသလို..သင်တန်းကျောင်းတွေဘက်မှာ..
Policy Maker အဆင့်..အာဏာပိုင်များ..က..လေ့လာ..သုံးသပ်ပြီး.. မှန်ကန်တဲ့..လမ်းညွှန်ချက်များ..ချမှတ်ပေးရင်ဖြင့်.. စနစ်သစ်..အောင်မြင်မှုရဲ့..တွန်းအား..တစ်ခု..ဖြစ်လာစေမှာပါ..။
4 vessels ran aground in Suez Canal ( 13th Oct. 20...
MET Meeting at DMA (15.10.2013)
မြန်မာ့ သင်္ဘောလောက တစ်ခေတ်ဆန်းစေချင် . .
THE PROBLEM WITH OILY WATER SEPARATORS!
New MEO Class I+II Combined Exam System